ညမင်းသား: 07/01/2012 - 08/01/2012
1. Sex Relieves Stress စိတ်ဖိအားကျစေတယ်
လိင်ဆက်ဆံမှုပြုရင် Stress စိတ်ဖိအား နည်းပါးစေတယ်။ Blood pressure သွေးတိုးကိုလည်း ကျစေတယ်။ စကော့တလန် သုတေသန လုပ်သူတွေက ယောက်ျား ၂၂ ယောက်နဲ့ မိန်းမ ၂၄ ယောက်ကို လေ့လာခဲ့တဲ့ ရလဒ်တွေအရ ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးဖိအားမှာ ပိုအရေးပါတဲ့ Diastolic blood pressure အောက်ဂဏန်း ကျတာဖြစ်တယ်။ ပွေ့ဖက်မှုကနေတောင်မှ အမျိုးသမီးတွေမှာ သွေးတိုးကျတယ်လို့ဆိုတဲ့ လေ့လာမှုလဲ ရှိပါသေးတယ်။
အစားအစာ အမျိုးအစားတွေဖြစ်တဲ့ Carbohydrate (ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်)၊ Protein (ပရိုတင်း) နဲ့ Fats (အဆီ) တွေဟာ အစာချေဘို့ရာ သူ့လိုအပ်ချက်နဲ့သူ မတူကြဘူး။ ကိုယ်ခန္ဓာက အစာအမျိုးမျိုးကို (အယ်လ်ကာလိုင်း) အခြေအနေ နဲ့ အက်စစ်ဓါတ် အခြေအနေတွေမှာ ကျေချက်ပေးရတယ်။
Digestion အစာကျေချက်ခြင်းဆိုတာ အစာလမ်းကြောင်းကနေ ထုတ်ပေးနေတဲ့ Juices စစ်ထုတ်ရည်တွေနဲ့ Enzymes (အင်ဇိုင်းမ်) တွေကနေ လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ စစ်ထုတ်ရည်တွေက လိုအပ်တဲ့ (အင်ဇိုင်းမ်) တွေအပေါ်မူတည်ပြီး အက်စစ်ဓါတ် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ (အယ်လ်ကာလိုင်း) ဓါတ် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ဒီလို အခြေအနေမှန်အတိုင်း ရှိမှသာ အစာကျေချက်လို့ ကောင်းတယ်။
ခပ်စပ်စပ်ဟင်းတွေစားရင် နှလုံးရောဂါ ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ ဖော်ထုတ်
ခပ်စပ်စပ်ဟင်းတွေစားရင် နှလုံးရောဂါ ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ ဖော်ထုတ် မကြာ သေးခင် ရက်ပိုင်း အတွင်းက ဟောင်ကောင် တက္ကသိုလ် ကနေ ဖော်ထုတ် လိုက်တဲ့ စစ်တမ်း တစ်ခုအရ ငရုတ်သီး စပ်စပ် ဟင်းလျာတွေ စားသုံးလေ့ ရှိသူတွေ ဟာ နှလုံးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်း မြင့်မား ကြကြောင်း သိရှိလာရပါပြီ။
ငရုတ်သီးမှာ အဓိက အားဖြင့်ပါဝင်တဲ့ အပူဓာတ်တစ်မျိုး ဟာ သွေးတိုးခြင်းအပြင် သွေးတွင်း ကိုလက်စရော များပြားခြင်းကိုပါ ချေ ဖျက်နိုင်တဲ့အတွက် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်ပွား မှုကိုပါ ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ် နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း အဆိုပါ တက္ကသိုလ် ကလေ့လာမှုကို ဦးဆောင်ခဲ့သူ ဒေါက် တာဇန်ယူချွမ်ကဆိုခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လူအများ စုဟာ မိုဘိုင်းဖုန်း တစ်လုံးရဲ့ အသုံးဝင်မှု လျှိုဝှက်တွေကို သိရှိ သူတွေ အလွန် နည်းပါး နေပါတယ်။ ကိုင်နေတဲ့ လူအများစုဟာ ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ အသုံးဝင်မှုကို အများအားဖြင့် Camera, Music, Bluetooth, FM, Radio. Alarm နဲ့ Game အစရှိတာတွေ လောက်သာ အသုံးပြု နေကြတာများပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီထက်ပိုပြီး အသုံးဝင်မှုနဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် အနည်းငယ်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အလုပ်ထဲမှာ စွမ်းအင်အပြည့်ရှိနေစေမည့် တစ်နေ့တာ နေထိုင်မှုပုံစံ
လုပ်ငန်း ခွင်ထဲ တစ်နေကုန် အလုပ်လုပ်ရာမှာ အလုပ် လည်းတွင်၊ စွမ်းအင်လည်း ပြည့်ဝ၊ လန်းဆန်း မှုလည်း အပြည့် ရှိနေစေဖို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက နာရီအပိုင်းအခြားအလိုက် ဘယ်လိုဖြတ်သန်းသင့် တယ်ဆိုတာကို အကြံပြုထားပါတယ်။
နံနက် ၆နာရီ အိပ်ရာထချိန်
ကြိုးစားပါ - တကယ်နိုးထသင့်တဲ့ အချိန်ထက် ၁၅ မိနစ်စောပြီး နှိုးစက်ပေးထားပါ။ ဒါဆိုရင် အိပ်ရာက ဝုန်းခနဲ ထစရာမလိုဘဲ စိတ်ရော ခန္ဓာကိုယ်ကိုပါ သက်တောင့်သက်သာရှိရှိ နိုးထနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွမ်းကျင်သူ၏ အကြံပြုချက် - အခန်းကို ကန့်လန့်ကာ ပါးပါးချပြီး အိပ်ပါ။ နံနက် နေခြည်နုနုထွက်လာချိန်မှာ ဦးနှောက်မှ အိပ်စက်မှုဆိုင်ရာ မယ်လတိုနင်ဟော်မုန်းထွက်နှုန်းကို လျော့ကျစေပြီး နိုးကြားစေတဲ့ အဒရီနယ်လင်ဟော်မုန်း စတင်ထွက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်နှိုးစက် ပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က တစ်ဝက်နိုးကြားပြီး ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
နံနက် ၇နာရီ အပြင်မထွက်ခင်
ကြိုးစားပါ - ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှုကို စတင်လုပ်ဆောင်နိုင်စေဖို့ နံနက်စာစားပေးပါ။
ကျွမ်းကျင်သူ၏ အကြံပြုချက် - နံနက်စာအဖြစ် ပန်းသီး၊ အခွံမာတဲ့အစေ့အဆန်နဲ့ ပေါင်မုန့်ညိုတစ်ချပ်ကို စားပေးရင်တောင် ကယ်လ်စီယမ်နဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်တို့ရရှိကာ တစ်နေ့လုံး စွမ်းအင်ပြည့်ဝ နေပါလိမ့်မယ်။
နံနက် ၈နာရီ အလုပ်သွားရာ လမ်းမှာ
ကြိုးစားပါ - ရုံးနဲ့ နီးနီးမှာ နေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ ရုံးကို လမ်းလျှောက်ြပီး သွားသင့်ပါတယ်။ ဒီလို လမ်းလျှောက်သွားတာကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ကျစေပြီး မောပန်းနွမ်းနယ်မှု ပြေပျောက်စေကာ ဖျားနာနိုင်ခြေ လျော့ပါးကြောင်း လေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။
ခြေ၊ လက်နှင့် လျှာတွင် ဖြစ်ပွားသော (Hand, Foot and Mouth Disease – HFMD) ရောဂါ တမျိုးသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၌
ဖေါ်ထုတ်၍ မရသေးသော ရောဂါသစ် တမျိုးဖြစ်သည်ဟု ထိုင်းမီဒီယာများ၌ ပညာပေး သတိပေးနေကြပါသည်။ ဤရောဂါ ၏ ဇစ်မြစ်ကို မသိရှိရသေးသည့်အတွက် ခြေလက်လျှာ (HFMD) ရောဂါဟု နာမည်ပေးထားပါသည်။
ရောဂါ လက္ခဏာမှာ အသက် ၁၂ နှစ်အောက် ကိုယ်ခံအားနည်းသော ကလေးများတွင် အဖြစ်များသည်။ အထူးသဖြင့် ပါးစပ်၊ လက်နှင့် ခြေထောက်များတွင် မီးလောင်ဖု ကဲ့သို့သော အရည်ကြည်ဖုများ ပေါက်ကာ အသားများ ရိတတ်ကြောင်း ထိုင်းကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အသိပေး ထားပါသည်။
အသက် ၂ နှစ် မှ ၅ နှစ် အရွယ် ကလေးငယ်များက ပိုမိုဖြစ်ပွားတတ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဘာကြောင့်ဖြစ်ပွားသည်ကို မသိရှိရသေးသည့်အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံထဲသို့ နယ်စပ်မှ တဆင့် ၀င်ရောက်လာသော ကလေးငယ်များကို ထိုင်းနိုင်ငံက စစ် ဆေးနေပါသည်။ ထိုင်းသတင်းစာ တခုဖြစ်သော ဘန်ကောက်ပို့ သတင်းစာထဲ၌ ---
ဆီးလမ်းကြောင်း စနစ်မှာ ပါဝင်တဲ့ ကျောက်ကပ်၊ ဆီးပြွှန်နှင့် ဆီးအိမ် စတဲ့ တစ်နေရာရာမှာ ပိုးဝင်တာကို ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ များသော အားဖြင့် ဆီးအိမ်နဲ့ ဆီးအိမ် အောက်ပိုင်းက ဆီးပြွှန်မှာ ပိုးဝင်တာ အဖြစ်များပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာများ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တဲ့ လူတိုင်းမှာ ရောဂါလက္ခဏာများကို ခံစားရတာမဟုတ်ပေမယ့် အများစုမှာတော့ အောက်ပါ လက္ခဏာအချို့ကိုတွေ...့ရတတ်ပါတယ်။
ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာ လျှပ်တပြက်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပြီး ယျေဘူယျအားဖြင့်ကတော့
- ဆီးပူ ဆီးကျင်ခြင်း
- ပမာဏနည်းနည်းနှင့် မကြာခဏဆီးသွားခြင်း
-ဆီးတွင်း သွေးပါခြင်း ၊ ဆီးနံ့အလွန်ပြင်းခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးလမ်းကြောင်း တလျှောက်ပိုးဝင်တဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီး ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
အသက်၂၃ နှစ်အောက် ဘောလုံးအသင်းဟာ ၂၀၁၁ ဆီးဂိမ်း ပြိုင်ပွဲမှာ ဗီယက်နမ် ကို ၄-၁ နဲ့
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန ။ ။ မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ဇွန်လ အတွင်းက သူ၏ ထိုင်းနိုင်ငံ ခရီးစဉ်ကို နှစ်ကြိမ် တိုင်တိုင် ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရပြီးနောက် လာမည့် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် သုံးရက်ကြာ ထိုင်းနိုင်ငံ ခရီးစဉ်ကို စတင်မည် ဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရိုဟင်ဂျာများနှင့် ပတ်သက်၍ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ မကြာသေးခင်က မှတ်ချက်များကို
သောကြာနေ့ထုတ် ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာ့ အာဘော်က ပြင်းပြင်းထန်ထန်
ဝေဖန်ခြင်းဖြင့် မြန်မာသမ္မတ ခရီးစဉ်အား ကြိုဆိုလိုက်သည်။
မူလက ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ဦးသိန်းစိန်၏ ထိုင်းနိုင်ငံ ခရီးစဉ် စတင်ရန် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် အရှေ့အာရှ ကမ္ဘာ့စီးပွါးရေးဖိုရမ် တွင်လည်း မိန့်ခွန်းပြောရန် စီစဉ်ခဲ့သေးသည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာ့ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လာရောက်ရန်နှင့် ထိုကွန်ဖရင့်တွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားရန် အားတက်သရော
ထိုင်းမှာ မြန်မာဘာသာစကား သင်ကြားဖို့ စိတ်ဝင်စားသူ များပြား
မြန်မာနိုင်ငံက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်း များပြားလာတဲ့အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာဘာသာစကား သင်ကြားဖို့ စိတ်ဝင်စားသူ များပြားလာတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အရင်က အခြေခံမြန်မာစာ သင်တန်းမှာတောင် လူများများမရှိခဲ့ဘူးလို့ ထိုင်းနိုင်ငံ ချူလာလောင်ကွန်း တက္ကသိုလ်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် မြန်မာစာ သင်ကြားနေတဲ့ ဆရာမ ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်က ပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ခုတလောမှာတော့ အတန်းခွဲသစ်တွေ စဖွင့်မှာကို စောင့်နေတဲ့သူတွေ အတော်များလာပါတယ်။ လောလောဆယ် တန်းခွဲသစ် မဖွင့်နိုင်သေးပေမဲ့ ဒီလအတွင်း ဖွင့်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်လို့ ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်က ပြောဆိုကြောင်း Channel News Asia သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
နာရီ (၃၀) စာ သင်တန်းကို ကလေးတွေနဲ့ လူကြီးတွေအတွက် အတန်းခွဲပြီး
လယ်မြေနှင့် သင်္ချိုင်းမြေ သိမ်းဆည်းခံရသဖြင့် ကရင်ဒေသခံများ အခက်အခဲတွေ့ကြုံ
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့မြောက်ဘက် စက်မှုဇုံနယ်မြေတ၀ိုက်ရှိ ထီးဖိုးခလုံးကျေးရွာတွင် လယ်ယာမြေများ သိမ်းဆည်းခံထားရသည့်အ ပြင် သင်္ချိုင်းမြေများပါမကျန် အစိုးရဘက်မှ သိမ်းဆည်းထားမှုကြောင့် ဒေသခံများ အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေကြရသည်ဟု ထိုဒေသမှလာ သည့် သတင်းများအရ သိရသည်။
“သူတို့လုပ်နိုင်တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ရွာသားတွေကိုလည်း မပေးလုပ်ဘူး” ဟု ထီးဖိုးခလုံးဒေသခံများက ပြောသည်။
အစိုးရဘက်မှ နယ်ခြားစောင့်တပ်ရင်း နယ်မြေနေအတွက်ဆိုကာ ထီးဖိုးခလုံးကျေးရွာရှိ လယ်ယာ၊မြေများနှင့် သင်္ချိုင်းမြေများကိုပါ သိမ်း ယူပြီး မြေထိုးစက်ကြီးများဖြင့် လာရောက်တူးဆွနေကြပြီ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဖလုံ-စဝေါ် ဒီမိုကရတ်တစ်ပါတီမှ အမျိုးသမီးရေးရာ တာဝန်ခံ နော်ယုဇန၀ါက ယခုလို ပြောသည်။
သူက “အစိုးရက BGF ကိုချပေးထားတဲ့မြေကွက်တွေက
KIO ထံ အစိုးရက အရေးတကြီး အကျိုးတော်ဆောင်များကို စေလွှတ်
ကချင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ (KIO) နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး နိုင်ရေးအတွက် အစိုးရ၏ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီသည်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးတော်ဆောင် များကို စေလွှတ်ပြီး KIO နှင့် ယနေ့ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း စေခဲ့ကြောင်း KIA ဗဟို စစ်ရုံးချုပ်မှ အရာရှိ တစ်ဦးက ပြောပါသည်။
“ပြန်တွေ့ဖို့ လာညှိနှိုင်း ခဲ့တာပါ။ သူတို့ အမည်ကိုတော့ မပြောပြချင်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ ဘက်ကတော့ ဆလန်ကပလနန် (ဦးလာနန်း) ပြောထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ ဗန်းမော် မြို့ကို လိုက်မသွား နိုင်သေးဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာ ကမရပ်ဘူး။ နေ့တိုင်း ဖြစ်နေသေးတယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ ပြန်တွေ့ဖို့ ဆိုတာတော့ ရှိပါတယ်။ အချိန်နေရာ တော့ညှိနှိုင်းနေ ပါတယ်။ အဆင်ပြေ မပြေတော့ မပြောနိုင်သေးဘူး၊ အကျိုး တော်ဆောင်တွေ ပြန်သွားပြီး အကြောင်းပြန်တော့မှ သိမှာပါ” ဟု
ဒု-သမ္မတ နေရာအတွက် ဦးမြင့်ဆွေအား ရာထားချက်ကို ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့က လက်မခံ
လစ်လပ် သွားသည့် ဒုတိယ သမ္မတ နေရာအတွက် ရန်ကုန်တိုင်း ၀န်ကြီးချုပ်အား အစားထိုး ခန့်အပ်မည့် ကိစ္စကို ဒုတိယ သမ္မတ ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့က လက်မခံကြောင်း ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့နှင့် နီးစပ်သူ လွှတ်တော် အမတ်တဦးက ရွှေဟင်္သာ သတင်းဌာနကို ပြောပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေအား တွေ့ရစဉ် (ဓါတ်ပုံ-အင်တာနက်)
လက်မခံသည့် အကြောင်းပြချက်ထဲ၌ ဦးမြင့်ဆွေ၏သမက် သြစတြေးလျားနိုင်ငံသားဖြစ်နေခြင်း၊ ၂၀၁၀ခုနှစ် လှုပ်ရှားမှုကို အမိန့်ပေးထား ခြင်းမရှိဘဲ ပြတ်ပြတ်သားသား ကိုင်တွယ်ခဲ့ခြင်း၊ (ဤကိစ္စ နေပြည်တော်မှ ၄င်းအား ခေါ်ယူ စစ်ဆေး ခဲ့ဖူးပါသည်)။ ထို့အပြင် သီတဂူ ဆရာတော် အရှင်ဥာဏိသရ ကျောင်းအား ရဲအင်အားဖြင့် ၀ိုင်းခြင်း၊ ဆရာတော် ကိုလည်း မလိုအပ်ဘဲ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ခြင်း၊ အချက်များလည်း ပါဝင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
လက်မခံသည့် ဒုတိယသမ္မတ၏ ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့တွင် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက အပါအ၀င် အဖွဲ့ဝင် ၇ ဦးပါဝင်ပြီး ပြီးခဲ့သည့် ကြာသပတေးနေ့ (ဇူလိုင် ၁၂)ရက်နေ့က
စေတနာ ၀ဿန် ဂီတ ရန်ပုံငွေပွဲ အကြို
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့က လာမယ့် စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာ MCC မှာ ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ စေတနာ ၀ဿန် ဂီတ ရန်ပုံငွေရှာဖွေပွဲအတွက် ယမန်နေ့ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့က Mr. Guitar စားသောက်ဆိုင်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ က ထင်ရှားတဲ့ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ အကြိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲလေး တခု လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ပုဂ္ဂလိက အာမခံလုပ်ငန်းများ စတင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုတော့မည်
မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှ ပုဂ္ဂလိက အာမခံလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားစေခဲ့ရာ လျှောက်လွှာ ပိတ်ချိန်တွင် လျှောက်လွှာ ၁၈၀ အနက် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် လျှောက်ထားသူ ၂၀ ဦးသာရှိကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ပုဂ္ဂလိက အာမခံလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် လျှောက်ထားလာသော လုပ်ငန်းများအနက် ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီသည့် လုပ်ငန်းများကို ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြပြီး သြဂုတ်လကုန်ပိုင်းတွင် စတင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှ အထွေထွေမန်နေဂျာ ဒေါက်တာမောင်မောင်သိမ်းက ပြောကြားသည်။ လာရောက် လျှာက်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များအနက် ပြည်တွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များကိုသာ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ရာ အာမခံလုပ်ငန်း ခြောက်မျိုးကို
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာသံဃာတော် အယောင်ဆောင်နေသော ဘင်္ဂလီမူဆလင် တစ်ဦးအား ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက် ၂၀၁၂ နေ့က စန္ဒာလောက ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ညအချိန်တွင် လှည့်လည်ပြီး ရခိုင်ရွာများကို မီးရှို့ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စန္ဒာလောက ဘုန်ကြီးကျောင်း ဆရာတော်ထံတွင် သင်္ကန်ဝတ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဘင်္ဂလီမူဆလင် ရိုတိယာ၊ ရခိုင်အခေါ် ခိုင်မင်းသည် လွန်ခဲ့သည့် ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ ည(၈) နာရီအချိန်တွင် နာဇီရွာ စေတီပြင်ကျောင်းအနီးမှ အိမ်တစ်ဆောင်အားမီးတိုက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အထက်လူကြီးများ ခိုင်းစေချက်အရ ဘလီတွင် ရခိုင်သားတစ်ဦးအား သတ်ဖြတ်ရာတွင် ပါဝင်ပြီး ခိုင်းစေသောသူများမှာ ခင်မောင်လှနှင့် ဘလီဆရာများဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါမူဆလင်က တောင်ခြေရာ ဘုန်ကြီးကျောင်းတွင် စစ်ဆေးမေးမြန်းစဉ် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရိုတိယာ (ခ) ခိုင်မင်းမှာ အသက် ၂၁ အရွယ်ရှိပြီး
အားလပ်ရက် ကိုခံစား ကြည့်ခြင်း (ရုပ်ရှင် ခံစား မှု )
by FNG on July 3, 2012
ဇွဲလွင် ၊ ၊ တကယ်တော့ လူတစ်ယောက်ကို နှလုံးသားနဲ့ ရင်းပြီး ချစ်မြတ်နိုးရတာရော ၊ နောက်ကိုယ့်ဘဝထဲမှာ
ကနေ ထားရစ်ခဲ့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရတာရောမှာ သတ္တိလိုအပ်ပါသည်။
ချစ်မြတ်နိုးရသော ကိစ္စမှာ ဒီလူက ကို်ယ့်အပေါ်နာကျင်စေမယ့်သူလား၊ ကိုယ့်အပေါ်နားလည်
ကြင်နာနိုင်မယ့်သူလား မသေချာပဲ ကိုယ့်ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက် အဖော်မွန် ဖြစ်နိုင်ကောင်းပါရဲ့ ဟူသော
မျှော်လင့်ချက်လေးတစ်ခုကို ယုံစား၍ ပုံအော လို်က်ရတာ ဖြစ်သည်။ ဒီလူကို ချစ်လိုက်ရပြီဆိုတာနှင့်
ကိုယ်က တခြားသူများထက်ပိုကာ သူ့အပေါ် အခွင့်အရေးတွေ ပိုပေးခဲ့ရပြီ။ နီးစပ်မှုတွေရှိခဲ့ရပြီ။ ကိုယ်ရဲ့
ကောင်းမွန်သော အရာများကိုသာမက အားနည်းချက် အပုံအပင်ကိုပါ သူက
ယနေ့ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ပထမဆုံး တက်ရောက်လာတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ပြည်သူ့ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြောင်း မှတ်တမ်းတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးနေသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို သင်အသိဆုံးပါ။ ဆရာဝန်တွေက သင်ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာ အလုံးစုံကို မသိနိုင်ပါဘူး။ သင့်အနေနဲ့ ရောဂါဝေဒနာ တစ်ခုခု ခံစားနေရတဲ့ အချိန်မှာ သင့်ကျန်းမာရေးက အကောင်းဆုံး အခြေအနေမှာ ရှိနေစေဖို့ သိထားသင့်တဲ့ အချက်တွေရှိပါတယ်။
(၁) ခန္ဓာကိုယ်အသံကို နားဆင်ပါ
သင့်ခန္ဓာကိုယ်က အမြဲတမ်း အချက်ပြနေပါတယ်။ တကယ်လို့ ကောင်းကောင်း နေမကောင်းဘူးဆိုရင် သင့်ကျန်းမာရေးကို ပြန်လည် စမ်းသပ်ရှာဖွေဖို့ အချိန်တန်နေပါပြီ။
(၂) ရောဂါရှာဖွေမှု အတွက် နှစ်ကြိမ်ခန့် စစ်ဆေးပါ
ရောဂါရှာဖွေတဲ့ အခါမှာ တစ်ကြိမ်နဲ့ အားမရဘဲ နေရာပြောင်းပြီး ဒုတိယအကြိမ်နဲ့ တတိယအကြိမ် ပြန်လည် စမ်းသပ်ရှာဖွေမှုကို လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ သင့်မှာ အသည်းရောင် အသားဝါဘီပိုး၊ စီပိုး ဒါမှမဟုတ် HIV ပိုးရှိနေကြောင်း အဖြေထွက်ခဲ့ရင်တောင် တခြား ရောဂါရှာဖွေရေး ဓာတ်ခွဲခန်းကို သွားပြီး ထပ်မံ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ လွဲမှားတဲ့ စစ်ဆေးမှု ရလဒ်တွေ ဖြစ်တတ်လို့ပါ။
နိုင်ငံခြားအန်ဂျီအိုများ အကူအညီ ဒေသခံ တိုင်းရင်း သားများ ငြင်းပယ်
မင်းတို့ ထောက်ပံ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ငါတို့မလိုအပ်ဘူး၊ မင်းတို့ မလာပါနဲ့
ယခု ကဲ့ သို့ ငြင်း ပယ်ရခြင်းမှာ မရိုးသားမူများ ရှိနေ၍ ဖြစ်ကြောင်း ဒုက္ခသည်များ အဓိက ခိုလုံရာ နေရာ ဖြစ်သည့် အလိုတော်ပြည့်ကျောင်း ဆရာတော်က မိန့်ကြားသည်။
“ သူတို့ရဲ့ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားခြင်း အားဖြင့် လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး ကူညီထောက်ပံ့ခြင်း ဆိုတဲ့ ခေါင်းစီးစာတန်း ကိုတော့ လေး စားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီစာတန်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ မရိုးသားမှုတွေရှိနေတယ်။ ဘာဖြစ် လို့ တုန်းဆိုတော့ ခေတ်အဆက် ဆက်မှာ ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ ငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေကို ဒီနိုင်ငံခြားက အဖွဲ့ အစည်းတွေ ကူညီထောက်ပံ့ခဲ့တယ်ဆိုတာ လက်ညှိုး ထိုးပြစရာ မရှိဘူး။ သူတို့အဖွဲ့အစည်းတွေက ဒီမှာ ရှိ တဲ့ မူဆလင် ဘင်္ဂလီတွေကိုဘဲ ထောက်ပံ့တယ်” ဟု ဆရာတော်က ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကော့မှူးမြို့နယ် ဒေသခံနှင့် သွားရောက် တွေ့ဆုံ
ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ)။ ။အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD ဥက္ကဋ္ဌ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သူ၏ မဲဆန္ဒနယ် ရန်ကုန်တိုင်း ကော့မှူးမြို့နယ် ဒေသခံ ပြည်သူများ တင်ပြသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်ဟု သတင်း လိုက်ပါယူခဲ့သူ ပေါ်ပြူလာနယူးစ်က သတင်းထောက် ကိုဥာဏ်လင်းအောင်က ပြောသည်။
ကော့မှူးမြို့နယ် ဆင်ခြံကျေးရွာ အောင်ဇမ္ဗူပရဟိတ စာသင်တိုက်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒေသခံ ပြည်သူများက ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေ၊ လျှပ်စစ်မီး၊ ချေးငွေ၊ အလုပ်အကိုင် ရရှိရေးနှင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးများနှင့် ပတ်သက်၍ တင်ပြချက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ကလေးတွေ ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေ၊ သူတို့ဒေသမှာ ဆေးပေးခန်း မရှိတဲ့ ကိစ္စတွေ၊ သန့်စင်တဲ့ရေ မရှိတဲ့ ကိစ္စတွေ ပါတယ်။ အလုပ်လက်မဲ့ ကိစ္စတွေ များသောအားဖြင့်
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တို့ ၏ အသံများ ( ဒေါ်စန္ဒာမင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ( အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်))
ကျွန်မတို့ အဆိုတင်သွင်းမှုကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၄၁) ယောက် စုပေါင်းတိုင်ပင်ပြီး တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်မြို့နယ် အလိုက်စုဆောင်းထားတဲ့ အချက်အလက်တွေရှိပါတယ် ။အဓိက ကတော့ မြေယာကိစ္စတွေကို တင်ပြသွားဖို့ ရှိပါတယ်။ မနက်ဖြန်မှာ ကျင်းပမဲ့ စတုတ္ထအကြိမ် ပြည်သူလွှတ်တော် ပထမ ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာကတော့ ပြည်သူလူထုတွေ နစ်နာမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မြေယာကိစ္စတွေ မှာ နစ်နာမှု မရှိစေရေးအတွက် ဦးစွာပထမ ထောက်ခံဆွေးနွေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စကလည်း လက်ခံဆွေးနွေးသင့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဓိက ပြဿနာဖြစ်နေတာက လယ်ယာမြေဆုံးရှုံးမှုတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီလယ်ယာမြေတွေ
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ် ဂြင်းကြီးအုပ်စု ကပိုင်ချောင်းကျေးရွာရှိ သောက်ရေကန် နှစ်ကန်ကို မသမာသူ များမှ အဆိပ်ခတ်သွားကြောင်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါ အဆိပ်ခတ်မှုကို ယမန်နေ့ ညနေပိုင်းက ပြုလုပ်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကပိုင်ချောင်းကျေးရွာမှ အမျိုးသမီးတဦးက ပြောသည်။
“ ဘယ်သူခတ်သွားတယ် ဆိုတောတော့မသိဘူး။ ဒီနေ့မနက်က ငါးတွေသေနေတာတွေ့ရပါတယ်။ လူတွေ ထိခိုက်မှုတော့ မရှိသေးပါဘူး။ ဒီနေ့ ကျောက်ဖြူက ဆရာဝန်တွေ စစ်ဆေးဖို့လာမယ်လို့ ပြောတယ်။”
ယခုအခါ ကပိုင်ချောင်းကျေးရွာသို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦးခန့်ရောက်ရှိနေပြီး စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရန် စီစဉ် နေကြောင်းလည်း သူမကဆက်ပြောသည်။
“ ဒီမနေ့မနက်က ရဲတွေရောက်တယ်။ ကျောက်ဖြူက
နေပြည်တော်မှာ ဒီကနေ့ စတင်ကျင်းပတဲ့ လွှတ်တော် စတုတ္ထအကြိမ် အစည်းအဝေးကို အတိုက်အခံ ပါတီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၄ ရက်က နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသည့် စတုတ္ထအကြိမ် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး၌ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တို့ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုနေကြစဉ်။
ဒီကနေ့ အစည်းအဝေးမှာ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုဖို့ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ NLD လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ၊ ဦးဖြိုးဇေယျာသော်နဲ့ ဒေါ်စန္ဒာမင်းတို့က ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုခဲ့ကြပါ တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ ခွင့်ယူထားတဲ့အတွက် ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့မှ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး တက်ရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခပ်စပ်စပ်ဟင်းတွေစားရင် နှလုံးရောဂါ ကာကွယ်နိုင်တယ်လ...
အလုပ်ထဲမှာ စွမ်းအင်အပြည့်ရှိနေစေမည့် တစ်နေ့တာ နေထိ...
ထိုင်းမှာ မြန်မာဘာသာစကား သင်ကြားဖို့ စိတ်ဝင်စားသူ ...
ဒု-သမ္မတ နေရာအတွက် ဦးမြင့်ဆွေအား ရာထားချက်ကို ရွေး...